Nivory tetsy amin’ny foiben’ny AKFM etsy Andravoahangy ihany koa ilay vondrona politika RMTF na ny Rodoben’ny Malagasy Tia tanindrazana ho an’ny fanorenana ifotony, omaly, ary nanazava fa zava-dehibe tsy azo tsinontsinoavina ny fiandrianam-pirenena. Nandefa taratasy misokatra ho an’ny filoham-pirenena frantsay ihany koa ity vondrona ity hanambaran’izy ireo fa gejain’ny frantsay tanteraka ireo nosy manodidina ary hangatahana ity firenena ity mba hamerina izany amin’ny tompony ahafahan’ny firenena roa tonta miverina mifanerasera tsy misy raorao intsony. Tsy ekena, hoy izy ireo, ny fidiran’i Madagasikara ao anaty frankofonia satria fikambanana miendri-panjanahana izany. Tsy ekena intsony koa ny fijanonan’ny filoha hery Rajaonarimampianina eo amin’ny toerany ary manentana ny Malagasy rehetra hihetsika. Nandray anjara mavitrika sy nandray fitenenana tamin’ity fivoriana ity moa ny filohan’ny antoko Otrikafo sy AKFM.